Andraikitra ara-tsosialy - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Yizheng mavesatra orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana zezika biolojika sy fitaovana famokarana zezika mitambatra. Na aiza na aiza misy azy, ny orinasa dia manao ny "fanajana ny soatoavina sosialy ao an-toerana sy ny fomban-drazana" ho fitsipika voalohany.
Eo am-panatanterahana orinasa manerantany sy fikatsahana fitomboan'ny tombom-barotra, dia nametraka hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana hatrany i yizheng ary niara-niasa ho an'ny fampandrosoana maharitra ny toekarena manerantany.
Miaraka amin'ny fahatsapana andraikitra mavesatra amin'ny andraikitra ara-tsosialy, ny indostria mavesatra Yizheng dia mandray ny asa soa ho tanjon'ny orinasa iray. Ny asan'ny fanomezana sekoly sy fanampiana ny mahantra dia mitantara ny tantaran'i Yizheng.